कसरी गर्न सकिन्छ सलह किराको नियन्त्रण? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कसरी गर्न सकिन्छ सलह किराको नियन्त्रण?
नेपालमा सलह किरा देखा परेको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार पर्सा, बारा, सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा सलह किरा देखा परेको हो । योसँगै सलह किरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । सलह किरामाथि ज्ञान हासिल गरेका विज्ञहरुका अनुसार सलह किरालाई रसायनिक तथा भौतिक दुवै तरिकाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विभिन्न तरिका अपनाएर यसले पुर्याउने क्षतीलाई कम गर्न सकिन्छ ।
सानो क्षेत्रमा यसको नियन्त्रण गर्नका लागि झुल र जाली राख्ने, ठूलो आवाज निकाल्ने, धुँवा लगाउने जस्ता तरिका अपनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, पासो लगाएर पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्तो तरिका सानो करेसाबारी, वा नर्सरीमा फलदायी हुन्छ ।
त्यस्तै, विज्ञहरुका अनुसार विभिन्न विषादीको प्रयोग गरेर पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मालाथिन, ल्याम्डा साइहेलोथ्रीन, क्लोरपाइरिफोस, डेल्टामेथीन लगायतका विभिन्न रसायनिक विषादीको प्रयोग गरेर सलहको समुहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । एकै पटकमा विषादी ठूलो क्षेत्रमा छर्किनुपर्ने भएकाले युएलभी शैली अपनाउँदा प्रभावकारी हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । यस किसिमका कुनै पनि विषादीको प्रयोग गर्दा मानिसले सुरक्षित कपडा लगाउन आवश्यक हुन्छ ।
यस्तो छ इरफान खानको जीवन–कथा